Windows Store Gift Card $10 USD ~ ICT.com.mm
HomeWindows Store Gift Card $10 USD
Windows Store Gift Card $10 USD
Windows Phone, tablet, PC or Xbox စသည့် Windows OS သုံး Device များအတွက် Windows Store မှတဆင့် Apps များ, Games များ, Songs များ, TV shows များ, Audiobooks များ စသည့်တို့အား ဝယ်ယူနိုင်သည့် ကဒ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။ ဤ Website... [Learn more]
Brand: MicrosoftFilter by: Prepaid Cards
Windows Phone, tablet, PC or Xbox စသည့် Windows OS သုံး Device များအတွက် Windows Store မှတဆင့် Apps များ, Games များ, Songs များ, TV shows များ, Audiobooks များ စသည့်တို့အား ဝယ်ယူနိုင်သည့် ကဒ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
ဤ Website တွင် ရောင်းချသော Windows Store Gift Card များမှာ USA တွင် ရောင်းချနေသော တရားဝင် cards များဖြစ်ပြီး Windows Store တွင် အသုံးပြု၍ ရကြောင်း 100% အာမခံပါသည်။
After you purchased from us, you will received an email that include Windows Store Gift Card's details.
ကျွန်တော်များ၏ Website မှ ကဒ်ဝယ်ယူပြီးပါက လူကြီးမင်း၏ Email တွင် Windows Store Gift Card ၏ အချက်အလက်များအား ချက်ချင်း ရရှိပါလိမ့်မည်။
(ထိုကဒ်အား အသုံးပြုရန်အတွက် လူကြီးမင်း၏ Windows Phone, tablet, PC (or) Xbox Device ၏ Start screen အား သွားရောက်၍ Windows Store အား ရွေးချယ်ပေးပါ။)
Swipe down from the top edge of the screen, and then tap "Your account". (If you're usingamouse, right-click, and then click Your account.)
(ထို့နောက် Screen အပေါ်ဖက်ရှိ tap များမှ "Your account" အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်၍ လူကြီးမင်း၏ Microsoft Account အား Login ဝင်ရောက်ပါ။ လူကြီးမင်းသည် mouse ဖြင့် အသုံးပြုနေပါက Screen ပေါ်တွင် right-click အား နှိပ်၍ "Your account" အား ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။)
Under Redeem code, enter the code from your gift card or the promotional code, and then tap or click Redeem.
(ထို့နောက် Redeem code ခေါင်းစဉ်အောက်ရှိ ကဒ်ဖြည့်သွင်းရမည့် နေရာတွင် ကဒ်နံပါတ်အား ထည့်သွင်း၍ "Redeem" Button အား နှိပ်ပေးပါ။)